Achọpụtaghachiri na 1971, Getadorelin acetate na-agbatịkwa dịka GnRH na-akpọkwa hormone bụ gonadotropin. Gonadorelin Acetate (34973-08-5) bụ decapeptide synthetic nke a na-akwadebekarị site na peptide synthesis na mpaghara siri ike. Ọ bụ GnRH nke a na-ahụ maka ntọhapụ nke hormone luteinizing nakwa dịka ihe na-eme ka hormone na-akpali akpali site na gland pituitary gland. Ọ na-emetụta nnọọ hormones na gonadotropins.
E gosipụtara ndị analogs GnRH maka iji ahụike n'ime iri asatọ na iri asatọ. Onye kachasị amara na GnRH analog bụ leuprorelin (aha aha Lupron). A na-enye analogs GnRH dị ka ọgwụ ntanetị. Ihe omumu nke GnRH secretion bu ihe omuma di iche iche nke ndi sayensi nuru site na nmepe ya. Na njedebe nkịtị, GnRH na-achịkwa ụzọ posh nke uto eto eto, ịzụ nwa, na nlekọta na-adịghị mma n'ime nwanyị, na gametogenesis n'ime nwoke. Ndụ ya dị mkpụmkpụ dị mkpa nfuli nkedo maka iji ya mee ihe. N'akpuru ọdịnala ọdịnala, GnRH ma ọ bụ GnRH agonists bụ ọgwụ na-eme mkpụmkpụ. Ozugbo a na-elekọta ha dị ka ihe ndị a na-etinye na hypodermic, a ga-eji ha rụọ ọrụ dịka ogologo oge
Ndị GnRH agonists na-eji nwayọọ nwayọọ eme ihe mgbe GnRH na-emepụta ihe na-agbanwe agbanwe, mgbe ụfọdụ nrụrụ abụọ na otu na-adịkarị n'ọnọdụ ọnọdụ vi (amino acid substitution), itoolu (alkylation) na iri (nhichapụ). Mgbanwe ndị a na-egbochi mmebi ngwa ngwa. Agonists nwere ndọtị abụọ gụnyere leuprorelin, buserelin, histrelin, goserelin, na deslorelin: ndị na-elekọta ụlọ na triptorelin bụ ndị na-arụ ọrụ na-anọchite anya ya (vi).
Systemic - Dị ka ugbu a gonadotropin-na-ahapụ secretion (GnRH), Gonadorelin bụ isi na-akpali nkwupụta na ịla n'iyi nke hormone gonadotrophic (LH) si na nzuzo nzuzo. A na-emepụta mmepụta hormone (FSH) nke na-eme ka Gonadotropic (FSH) mepụtawanye ihe site na Gonadorelin, ma ọ bụ n'ókè dị ala. N'ihu prepubescent na ole na ole endocrine glands na-arụ ọrụ ọrịa, nzaghachi gonadotrophins dịkwa oke karịa mmeghachi omume hormone gonadotrophic. Na Gonadorelin acetate injection gi kwesiri inye ndi mmadu ka ha zuta gi ka gi onwe gi jiri aka gi dozie onwe gi.
Nkwalite nke ntụrụndụ nke na-agba bọl; mana, ọ dịghị ihe ọmụma ọ bụla kwadoro iji kwado nkwupụta a - libido stimulant na carnivores na-egosi na ezughị ezu akaebe. Otutu ichota ule nwere ike ghara ikwado nkwubi okwu a.
Ọchịchị Pulsatile ma ọ bụ ihe na-aga n'ihu na-aga (2.3-14 ng / kg / min maka 7-9 d) kpatara usoro 2 na sistemụ na 4 bitches n'otu nnyocha. A na-akọ na nchịkwa na-aga n'ihu maka 7-14 d site na nfe nfe dị iche iche ga-agwụ n'ọtụtụ dị elu nke ntinye nsị. Ọ dị mkpa ịhụ na nchịkwa nke GnRH agaghị abụ ihe siri ike: ịmịnye ma ọ bụ ịmịpụ nke analogs GnRH site na obere nfuli ma ọ bụ nkwụnye hypodermic nwere ike ime ka ịmalite ime na ime ime, ọ bụrụhaala na GnRH na-akwụsị mgbe usoro ndu iji gbochie njedebe endocrine gland failure. Otú ọ dị, ịmalite ime ihe na-eme ngwa ngwa GnRH ma ọ bụ GnRH na-agonists arịa ọbara agaghị enwe ike ịgwọ ọhụụ site na nkwụsị nke nhicha nke infusion ma ọ bụ ihe dị mkpa maka ụlọ ọgwụ na mkpokọta intravenous.
Deslorelin, nke ana-arụ ọrụ GnRH, bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị na Australia dịka nkwụsị nke subdermal implant nwere otu nke .1 mg nke Deslorelin. Ọ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na synchroous. Na nmalite ọmụmụ ihe, ntụrụndụ na-eme nri bụ nke ọzọ na-enwe ihe ịga nke ọma mgbe ọ na-elekọta ụlọ ọrụ 1.5 mg nke Deslorelin na 3 bitches. Otú ọ dị, ntinye nke rut na bitches abụghị ihe a pụrụ ịdabere na ya n'otu oge a ụzọ a na-aga Deslorelin ma e jiri ya tụnyere ihe odide subdermal. Mgbanwe dị iche iche nke ịmịnye ọgwụ na metabolism n'etiti bitches, ma ọ bụ ọgwụ mgbochi agbanwe agbanwe, nwere ike ịme ikpe maka ihe ndị a.Na-eduzi na Uru Uru na Egwu Ejila
Gonadorelin bụ ọgwụ na-ejikarị ụmụ nwanyị na-enwe nsogbu na oge mgbatị ha si na ya pụta gonadotropin-ịtọhapụ hormone. Enwere ike iji ya mee ihe dị ka nzụlite ọmụmụ nwaghi nwanyi dịka ọ na-akwalite mmepụta nke GnRH. Ọgwụ dị mkpa maka ndị na-emepụta ahụ na ndị na-eme egwuregwu na-achọ inweta ahụ ike ma mee ka ahụ ike zuru ezu. Otú ọ dị, nke a nwere ike ime naanị ma ọ bụrụ na eji ngwaahịa ahụ eme ihe n'ụzọ ziri ezi. Dị ka onye na-eme egwuregwu, ị kwesịrị ị hụ na onye na-azụ gị, dọkịta gị na onye ọkachamara gị maara na ị na-eji ọgwụ a eme ihe. Mmega ahụ na nri kwesịrị ekwesị kwesịrị iso Gonadorelin acetate injection iji mekwuo nsonaazụ ya.
A ghaghị inye ọgwụ ahụ site na injections nke ị ga-etinye ya n'ime ahụ gị n'okpuru akpụkpọ ahụ ma ọ bụ vein site n'iji mgbapụta na-emepụta ihe dịka onye dọkịta gwara gị. Ọ bụrụ na ị maghị banyere ịgbanye onwe gị, jide n'aka na otu dọkịta na-elekọta ọgwụ ahụ. Dọkịta gị nwekwara ike ịzụ gị ka ị ga-esi gbanye onwe gị; mgbe ahụ, mgbe ị ga-aga, ị nwere ike ịmalite ime ya n'ụlọ. Cheta, ime ihe Gonadorelin acetate na-ejighị ọgwụ ọjọọ gwọọ ọgwụ nwere ike iduga nsogbu ndị dị njọ.
Rịba ama na ọgwụ ahụ nwere ike iji ọgwụ ndị ọzọ na-emetụta hormone. Ọ bụrụ na ị nọ n'okpuru ọgwụ ọ bụla, jide n'aka na ị gwara dọkịta gị gbasara ihe mgbakwunye na ọgwụ ndị ị na-eji. Ị ga-agwa dọkịta ahụ ma ọ bụrụ na ị dị ime n'ihi na ọ bụ ezie na enweghi ihe akaebe banyere otú ọ pụrụ isi metụta nwa ebu n'afọ, ojiji nwere ike itinye nwa e bu n'afọ n'ihe ize ndụ ma ọ kacha mma ma ọ bụrụ na a gwara gị ndụmọdụ.
Akụkụ ọma nke ọgwụ a bụ na enwere ike ịchịkwa mmetụta ndị dị na ya ma ọ bụrụ na ị na-agbaso ntụziaka dọkịta gị. Adanyela onwe gi iji ogwu a ma o buru na dọkịta agwa gi ka i wepuo ya. N'aka nke ọzọ, ihe ka ọtụtụ n'ime mmetụta ndị dị na Gonadorelin acetate na-esi na ya pụta. Jidesie usoro onu ogugu iji nye gi aka. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-enwe mmetụta dị njọ karịa ndị ọzọ n'ihi usoro dị iche iche mmadụ. Ị nwere ike iji enyi gị were ọgwụ a, ma ị nwere mmetụta ndị ọzọ karịa ya / ya. Nke ahụ dị mma karịa ọgwụ ọjọọ. Ihe na-arụ ọrụ maka ị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka enyi gị ma ọ bụ akaebe.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike ịzụta Gonadorelin Acetate ntụ ntụ ma kwadebe ya n'onwe gị kama ịnweta ya n'ụdị mmiri. Tupu ịzụta ịzụta, hụ na ị nwere ike ịtụkwasị obi na saịtị ahụ site na ịrịọ maka ederede site na ndị ị maara nwere ike iji ọgwụ ahụ eme ihe. Anyị bụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi na onye a pụrụ ịdabere na ya n'ịntanetị, na ị nwere ike ịtụkwasị obi na anyị ga-enye gị ngwaahịa ahụ n'ime oge kachasị oke ga-ekwe omume na jide n'aka na a ga-edebe nzuzo. Kpọtụrụ anyị ka ị rịọkwuo ajụjụ ma mee ka usoro gị.
Akın, O., Yavuz, ST, Hacıhamdioğlu, B., Sarı, E., Gürsel, O., & Yeşilkaya, E. (2015). Anaphylaxis ka gonadorelin acetate na nwa agbọghọ nwere ogologo oge ọ dị obere. Akwụkwọ nke Pediatric Endocrinology na Metabolism, 28 (11-12), 1387-1389.
Rastogi, S., Shukla, S., Kalaivani, M., & Singh, GN (2018). Usoro ọgwụgwọ peptide: Ọdịdị dị mma, nchebara echiche, na atụmanya. Nchọpụta ọgwụ ọjọọ taa.
Endo, N., Nagai, K., Tanaka, T., & Kamomae, H. (2013). Pro protesterone profaịlụ na caudal vena cava na jugular vein na nzaghachi na ngwangwa lumeinizing hormone mkpali mmeri site na GnRH ọgwụgwọ n'oge ufọt ufọt luteal phase na ehi na-ehi ara ehi. Journal of Reproduction and Development, 2012-191.